Kubuyiselwe ikhaya laseGeorgia eduze nendawo yedolobha
Phibsborough, County Dublin, i-Ireland
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Fiona
Isitezi esingaphansi siyingxenye yendlu yaseGeorgia esanda kuvuselelwa eyakhiwa ngo-1826.
Kukhona elinye igumbi elitholakala kule ndawo ngaphansi kohlu oluhlukile. Igumbi ngalinye linokuvumelana nezimo ukuze lisetshenziswe njengegumbi eliphindwe kabili noma igumbi elinamawele.
Indawo engaphansi yayiklanywe ngokukhethekile njengendawo yokuhlala yezivakashi; sasifuna ukusisebenzisa kahle lesi sikhala ngokwengeza ukufudumeza kwangaphansi, i-ensuite, ukubeka isango elihlukile lezivakashi, ukufaka isiqandisi nendawo yokusebenzela.
Umndeni wethu uhlala engxenyeni engenhla yendlu kodwa uhlukaniswe ngomnyango oshelelayo nendawo yokuhlala yezivakashi ukuze ujabulele ubumfihlo bakho.
4.95 ·41 okushiwo abanye
4.95 · 41 okushiwo abanye
IBroadstone iseceleni kwedolobha lasePhibsborough. Inokukhethwa okuhle kwezitolo zekhofi, amabha kanye nama-pubs lapho ungajabulela khona i-brunch nama-pizza ikakhulukazi. Izintandokazi uJays, The Back Page, Two Boys Brew, Loretta's, Legit Coffee kanye neBonobos.
Isikhala singafinyelelwa noma nini njengoba kunebhokisi lokukhiya ngaphandle komnyango ukuze ukwazi ukufika noma nini lapho kukufanele. Ngisebenza edolobheni ngakho ngihlala ngiseduze uma kuba nezinkinga futhi ngingaphendula ngoWhatsapp, umbhalo noma ucingo uma udinga ukuxhumana ngesikhathi uhlala.
Isikhala singafinyelelwa noma nini njengoba kunebhokisi lokukhiya ngaphandle komnyango ukuze ukwazi ukufika noma nini lapho kukufanele. Ngisebenza edolobheni ngakho ngihlala ngised…
Hlola ezinye izinketho ezise- Phibsborough namaphethelo